နိုးလော့! | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈
ဖတ်လို ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) မြန်မာ ရိုမေးနီးယား အင်္ဂလိပ်
▪“ကမ္ဘာချီပူနွေးမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသောအကြောင်းရင်းတချို့ကြောင့်ဖြစ်စေ ရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်နေသော ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားသည့် ဘေးဒဏ်အရေအတွက်သည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များစပ်ကြားတွင် သုံးဆတိုးများလာ၏။”—The Economist မဂ္ဂဇင်း၊ ဗြိတိန်။
▪အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်အစိုးရက အသက် ၁၀ လသားလေးတစ်ဦးကို သေနတ်တရားဝင်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ပေးလိုက်၏။ အရပ်အမြင့် နှစ်ပေသုံးလက်မရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၂၀ ရှိသော သားဖြစ်သူအား သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ပြုပါရန် ဖခင်ဖြစ်သူက တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုပြည်နယ်တွင် လျှောက်ထားသူများ၏အသက်ကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိချေ။—Cable News Network, အမေရိကန်။
▪သိပ္ပံပညာရှင်များသည် “ရေဆူမှတ်ထက် ပို၍ပူပြင်းသော” အပူချိန်တွင် ရေကို ဖိသိပ်စက်ဖြင့် ရေခဲအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြ၏။ “သာမန်” ရေခဲအပြင် “အပူချိန်နှင့်ဖိအားအမျိုးမျိုးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြားသိရှိထားသည့် ရေခဲပုံစံများမှာ အနည်းဆုံး ၁၁ မျိုးရှိ၏။”—Sandia National Laboratories, အမေရိကန်။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှု ဂျော်ဂျီယာတွင် ထပ်မံအတည်ပြု
ယေဟောဝါသက်သေများအပေါ် ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုကို မသိကျိုးကျွန်ပြုသည့်အတွက် ဂျော်ဂျီယာအစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့်အနေနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥရောပတရားရုံးက စီရင်ချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတရားရုံးသည် တည်ရှိပြီးသား ခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်ခုအဖြစ် သက်သေခံများအား ဝတ်ပြုရေးနှင့်ကျမ်းစာသင်အံမှုတို့အတွက် စုဝေးပိုင်ခွင့်ကို ထပ်မံအတည်ပြုပေးလိုက်ပြီး တရားရေးကုန်ကျစရိတ်များနှင့် စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရမှုတို့အတွက် သက်သေခံများကို လျော်ကြေးပေးရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလနှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအကြားတွင် ယေဟောဝါသက်သေများအပေါ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ၁၃၈ ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဂျော်ဂျီယာအာဏာပိုင်များထံ တိုင်တန်းချက် ၇၈၄ ခုတင်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် အဆိုပါတိုင်တန်းချက်များကို အလေးအနက်ထား၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း မပြုခဲ့ချေ။ ရဲအဖွဲ့သည် ချက်ချင်း ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပင် မပြုခဲ့သည့်အပြင် အကြမ်းဖက်ခံရသည့် သက်သေခံများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးခြင်းမပြုခဲ့ချေ။ အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှစ၍ များစွာလျော့ပါးသွားခဲ့သည်။
ပီရူးနိုင်ငံမှ ရှင်းပြရခက်သည့် အနှစ် ၂၃၀၀ သက်တမ်းရှိ အပျက်အစီးတစ်ခု၏ နေရာတချို့သည် နေကြည့်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များက ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ချန်ကီရိုဟုခေါ်သော အဆိုပါအပျက်အစီးတည်ရှိရာနေရာတွင် တောင်ကြောတစ်ခု၏ထိပ်ပေါ်၌ မျှော်စင် ၁၃ ခုသည် ချောမွတ်ညီညာသည့် “သွား” များ စီတန်း၍ရှိနေသကဲ့သို့ အတန်းလိုက်တည်ရှိနေ၏။ နေကြည့်စခန်းများကို “နေ့တာအတိုဆုံးနေ့ [ဆောင်းယဉ်စွန်းချိန်] နှင့် နေ့တာအရှည်ဆုံးနေ့ [နွေယဉ်စွန်းချိန်] ၌ တစ်ဖက်တစ်ချက်[အစွန်များ]တွင်ရှိသော မျှော်စင်များအပေါ် နေထွက်နေဝင်ကိုကြည့်၍ နေနှစ်၏ အစနှင့်အလယ်ကို သတ်မှတ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တည်ဆောက်ထားသည်” ဟု Science မဂ္ဂဇင်းကရှင်းပြ၏။ မျှော်စင်တန်းကြားရှိ မျှော်စင်များက အချို့အချိန်များတွင် နေထွက်နေဝင်အနေအထားကို သတ်မှတ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကောက်ပဲသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရမည့်အချိန်ကို သိရှိထားရန် အရေးကြီး၏။ သို့နှင့် “လူတို့သည် ရက်စွဲကို အတိအကျသိရှိထားဖို့ [လိုအပ်] သည်။”
[စာမျက်နှာ ၂၁ ပါ ပုံကြမ်း/ရုပ်ပုံ]
အမျိုးသမီးများကို ဝမ်းနည်းစေသည့် ရုပ်ပုံများ
“မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးများတွင် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ပိန်ပိန်ပါးပါးအမျိုးသမီးများ၏ ရုပ်ပုံများက စာဖတ်သူအမျိုးသမီးထုအား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရပ် သို့မဟုတ် အသက်သည် မည်သို့ပင်ရှိလင့်ကစား ဝမ်းနည်းစေ၏” ဟူ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မစ်ဆူရီ-ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှ သတင်းတစ်ပုဒ်ကဆိုလေသည်။ ပညာပေးခြင်း၊ သွန်သင်ပေးခြင်းနှင့် အကြံပေးခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပညာတွဲဖက်ပါမောက္ခ လော်ရီမင့်ဇ်၏အဆိုအရ “သတင်းမီဒီယာများတွင် စံပြကိုယ်ဟန်အဖြစ် ဖော်ပြခံရသည့် ပိန်ပိန်ပါးပါးအမျိုးသမီးများ၏ ရုပ်ပုံများကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် ဝဖြိုးသောအမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့ထက် ပို၍ပိန်သောအမျိုးသမီးများထက် အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းကြသည်ဟု ယူဆရ၏။” သို့သော် “ကိုယ်အလေးချိန်က အဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မတို့ တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီရုပ်ပုံတွေကို ကြည့်ရှုခြင်းက လူတိုင်းကို ဝမ်းနည်းစေပါတယ်” ဟုမင့်ဇ်ကဆို၏။
မကြာမီ ရာဇဝတ်မှု ‘ရှိတော့မည်မဟုတ်’
ကြီးလေးသောအပြစ်များကို ဘုရားသခင် ခွင့်လွှတ်သလော
တိုက်ကြီးတစ်တိုက်ကိုဖြတ်ဖို့ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ကြာခဲ့
လူငယ်များအမေး ငါနေမကောင်းရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈
နိုးလော့! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈